निर्वाचन आयोगको निर्णयले ओली समुहलाई ठूलो धक्का अब के गर्छ ओली ? « Kalakhabar
निर्वाचन आयोगको निर्णयले ओली समुहलाई ठूलो धक्का अब के गर्छ ओली ?
प्रकाशित मिति : सोमबार, १२ माघ २०७७ २२:३१
१२,माघ–काठमाण्डौं । आईतबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले ओली पक्षलाई ठूलो धक्का परेको छ । नेकपाका दुबै समूहलाई कानूनी मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयले दुवै पक्षलाई धक्का परेको छ भने सबै भन्दा ठूलो धक्का ओली पक्षलाई परेको हो ।
उनले ११ सय भन्दा बढी संख्यामा थपेका केन्द्रिय सदस्य पनि अब कुनै काम नलाग्ने भएको छ । कारण आयोगले ओलीद्वारा मनोनित करिब एक हजार केन्द्रीय सदस्यहरु र संशोधित विधानलाई मान्यता दिएन, । जसले गर्दा साविक केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओली अल्पमतमा परेको कानूनतः पुष्टि भएको छ ।
किनभने, निर्वाचन आयोगले साबिक ४४१ केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नै बैधानिकता दिएको छ । यीमध्ये करिब ३ सय सदस्य प्रचण्ड(माधव पक्षमा छन् । अल्पमतबाट गरिएको विधान संशोधनले पनि अब मान्यता नपाउने भएपछि ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी करिब एक सय जनामा खुम्चिएको छ ।
साथै ओली समूहले गरेका निर्णयहरुले निर्वाचन आयोगमा कानूनी हैसियत नराख्ने प्रष्ट भएको छ । जसले गर्दा अब ओलीले के गर्छ भन्ने जनताले आँकल गरेका छन् ।